Itoobiya oo ka jawaabtay warbixin Ilhaan Cumar ka soo saartay xiisadda dalkaa ka taagan | Berberanews.com
Home WARARKA Itoobiya oo ka jawaabtay warbixin Ilhaan Cumar ka soo saartay xiisadda dalkaa...
Itoobiya oo ka jawaabtay warbixin Ilhaan Cumar ka soo saartay xiisadda dalkaa ka taagan
“Ra’isal Wasaare Abiy Ahmed waa inuu gargaarka aadamenimo marin u furaa, oo uu ogolaadaa in baadhayeel madax banaaan oo xuquuqa aadanaha aqoon u lihi ay tagaan Tigray si aynu u ogaanno tirada dhabta ah ee gumaadka halkaa laga soo sheegay. Sidoo kale waa inuu qaadaa dhamaan xayiraadda isgaadhsiineed ee saaran oo uu hay’adaha aan dawliga ahayn iyo ururada xuquuqal insaanka u ogolaadaa in ay la xidhiidhaan shaqaalahooda gobolkaa jooga isla markaana u ogolaadaa dadka ku nool Tigray, oo kuwo badan oo dadka i soo doortay ahi ka mid yihiin, in ay qoysaskooda la xidhiidhaan” ayey tidhi Ilhaan oo dhaliilo u jeedisay xukuumadda Itoobiya.
Hase yeeshee warkaa ka soo baxay xafiiska Ilhaan Cumar waxa ka jawaabay danjiraha Itoobiya u fadhiya magaalada Washington ee dalka Maraykanka, Fitsum Arega, oo warqad uu toos ugu diray ku deedafeeyey arimahaa ay sheegtay.
“Waxaan jecelahay in aan kuu xaqiijiyo in aanay jirin wax walaac keeni karaa. In aad si dhexdhexaad ah oo ujeedo saxan leh u qiimayso xaqiiqada jirtaa waxay kaa shaafiyi karta welwelka aad qabto oo waxay kuu suurto gelinaysaa in aad si dheeli tiran u fahamto xaaladda dhabta ah ee arimaha aad carrabka ku dhufatay” ayuu ku yidhi warqadda uu u diray.
“Xukuumadda Itoobiya way ku gawracan tahay xeerarka iyo axdiyada sharciga caalamiga ah ee dhigaya in maxaabiista oo dhan loola dhaqmo si tixgelin leh oo aan dhaawacayn sharaftooda. Sidaa awgeed, Xukuumadda Itoobiya waxa ka go’an in ay gudato waajibaadkaa saaran oo ay suurto geliso in ay maxaabiistu helaan daryeel caafimaad oo la mid ah ka ay muwaadiniinta dalku helaan, iyo sidoo kale in adeegga caafimaad ee ay u baahan yihiin si bilaa lacag ah loogu fidiyo iyada oo aan lagu kala takoorayn sifo sharci [oo ah in muwaadiniinta qaarkood maxaabiis yihiin iyo in kale]. Hadaan ka hadlo maxaabiista aad magac dhawday, dhamaantood waxay daryeel caafimaad ka helaan Isbitaalada Itoobiya ka ugu wanaagsan oo la yidhaa Tor Hailoch oo ah mid loo yagleelay si uu adeegga caafimaad ugu fidiyo ciidamada qalabka sida ee Itoobiya. Maxaabiista sida la sheegay cuntada ka soomay haatan way joojiyeen cunto ka soomiddii, intoodii u baahnayd daryeel caafimaadna waa loo fidiyey oo haatan caafimaadkoodu wuu fiican yahay” ayuu ku yidhi safiirku warqadda jawaabta ah ee uu u diray xildhibaan Ilhaan.
Colaadda Gobolka tigray ayaa weli taagan inkastoo dowladda Itoobiya ay sheegtay in ay qabsatay magaala madaxda gobolka ee Mekelle. Dagaalkaas waxaa ka dhashay qasaare naf iyo maalba leh. Gulufkaan oo dhaxeeya dowladda Federaalka ah ee Itoobiya iyo xoogagga TPLF waxaa ku barakacay kummanaan shacb ah, kuwaas oo gaaray Suudaan.
Haddaba muxuu gobolkan caan ku yahay?
1. Boqortooyadii Aksum waxaa xurun u ahaa gobolkan: Waxaa lagu sifeeyey mid ka mid ah ilbaxyadii ugu waaweynaa ee horay u soo maray dunida. waxay mar ahayd dowladdii ugu xoogga badneyd ee u dhexaysay boqortooyooyinkii Roomaanka iyo Beershiya
2. Burburka magaalada Aksum oo hadda ay leedahay Hay’adda Aasaarta ee Qaramada Midoobeey: Goobta, oo ka bilaabmaysa inta udhaxeysa Qarnigii 1aad iyo kii 13aad ee AD, waxaa ku yaal dhismayaal waaweyn, qalcado, qabriyo boqortooyo iyo kaniisad.
3. Inta badan dadka ku dhaqan gobolka Tigray waa masiixiyiin haysta madhabta Orthodox-ka ee Itoobiya: Diinta masiixiga ayaa gobolka Tigray lagu
4. Luuqada ugu weyn ee gobolka waa Tigrinya, taasi oo ay ku hadlaan ilaa toddoba milyan oo qof oo ku nool dunida.
5. Sisinta waa dalagga ugu muhiimsan ee ka baxa gobolka: Waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Shiinaha iyo waddamo kale.
Previous article“Dadkii aan waxba beeranin way bakhtiyeen” Madaxweyne Biixi
Next articleTaariikh nololeedka Faadumo-Nakruuma oo Muqdisho ku geeriyootay